नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : पूर्व प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्ति दलबलसहित रेशम चौधरीलाई भेट्न जानु, गम्भीर मुद्दाका कैदीको फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा प्रदर्शन गर्नु कत्ति पनि नैतिक काम होइन
पूर्व प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्ति दलबलसहित रेशम चौधरीलाई भेट्न जानु, गम्भीर मुद्दाका कैदीको फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा प्रदर्शन गर्नु कत्ति पनि नैतिक काम होइन
पूर्व प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्ति दलबलसहित रेशम चौधरीलाई भेट्न जानु आफैमा उचित थिएन । आमनागरिक सरह भेट्नुभो रे, ठिकै होला तर त्यति गम्भीर मुद्दाका कैदीको फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा प्रदर्शन गर्नु कत्ति पनि नैतिक काम होइन । त्यो सुरक्षाका दृष्टिले पनि खतरनाक विषय हो ।
उहाँ पूर्व प्रम हुनुहुन्छ । राज्यले सचिबालयदेखि सुरक्षाकर्मीसम्म उपलब्ध गराउँछ । राज्यका अङ्ग र प्रचलित कानुनप्रति आम नागरिकका रूपमा म विद्रोही बन्न सकूँला, उहाँले त्यसको सम्मान र रक्षा गर्नुपर्छ । यो विषय अनुचित लागेको भए गृहमन्त्री या प्रधानमन्त्रीलाई नै सम्पर्क गरेको भए हुन्थ्यो र कानुनी व्यवस्था के छ भन्ने बुझेको भए हुन्थ्यो ।
विदेशबारे सबै थाहा छैन, तर बेलायतमा चौधरीभन्दा कम संवेदनशील मुद्दाका कैदीलाई समेत अस्पतालमा हतकडी लगाएर राखिन्छ । र, कसैलाई यसरी फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने अनुमति हुँदैन ।
चौधरीमाथि कुखुराचोरीको मुद्दा लागेको होइन, मान्छे मार्नेजस्तो गम्भीर मुद्दा हो । फेरि लामो समय कानुनी भाषामा उनी भगौड़ासमेत हुन् । यी दुबै कारणले गर्दा प्रहरीले उच्च सतर्कता अपनाउनु अस्वाभाविक होइन । यदि पन्ध्र जना व्यक्ति हुलमुलसहित आउने भने अपराधी भाग्नसक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यतिबेला जबाफदेही र सजायको भागीदार को हुन्छ ? यी कानुनहरू उहाँहरूले नै बनाएको हो ।
रेशम चौधरी निर्दोष होलान्, महान् होलान्, क्रान्तिकारी होलान्, जे होलान् । मेरो त्यसमा टिप्पणी छैन । तर कानुन बनाएर अदालती प्रक्रियाबाट उहाँलाई निर्दोष बनाइदिनुस् न । कि अदालत खारिज गर्नुस् र सबै कैदीलाई फूलमाला लगाएर बिदा गरिदिनुस् । त्यसपछि चौधरीलाई भेट्नुस् । अँगालो मार्नुस् या फोटो खिच्नुस् !
अनि राजाको हुकुमी शैलीमा प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले नेल लगाउन आदेश दिने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने फरमान दिन मिल्छ ? नियम, कानुन, पद्धति, प्रक्रिया र परम्परा के छ त्यसको छानबिन गरेर आवश्यक देखिए कानुन परिवर्तन गर्ने र दोषी देखिए कारबाही हुन्छ भन्नुपर्ने होइन ? प्रधानमन्त्रीले फैसला सुनाउने हो ? विधि हुँदैन ? के अब कर्तव्य पूरा गर्ने साधारण प्रहरीलाई बलि चढाउने ? हत्या, बलात्कारका अन्य अपराधीलाई के गर्ने ? विधि बनाउने कि आदेश दिने ?
देशका यति उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरूको यो प्रवृत्ति कत्ति पनि आशालाग्दो छैन !
Posted by www.Nepalmother.com at 3:48 AM